IJifflenow: Ukuthi Umhlangano we-Automation Platform Uwuthinta Kanjani Umcimbi ROI | Martech Zone
ULwesibili, May 7, 2019 UMsombuluko, May 6, 2019 URavi Chalaka
Iningi lamabhizinisi amakhulu lenza utshalomali oluningi emicimbini yezinkampani, izingqungquthela nezikhungo zokwazisa ngokulindela ukusheshisa ukukhula kwebhizinisi. Eminyakeni edlule, imboni yemicimbi izame amamodeli nezindlela ezahlukahlukene zokunikeza inani kulokhu kuchithwa. Imikhondo yomkhondo eyedlula yonke eyenziwe, okuvela emithonjeni yezokuxhumana, nocwaningo lwababekhona ukuqonda umthelela wemicimbi ekwaziseni ngomkhiqizo. Kodwa-ke, imihlangano iyingxenye ebalulekile yokwenza ibhizinisi. Ukuze aphumelele, amabhizinisi kufanele aqhube imihlangano yamasu we-B2B mathupha. Eqinisweni, ucwaningo lukhombisa lokho Abaphathi abayisishiyagalombili kwabayishumi bakhetha imihlangano yokubonana nabantuemihlanganweni ebonakalayo. Kungani? Umhlangano wobuso nobuso udala ukwethembana, izinqumo zebhizinisi ezifika ngesikhathi futhi ukhuthaza ukucabanga okuyinkimbinkimbi okuvula umnyango wokuthengiselana ngebhizinisi kanye nokwanda kwemali engenayo.
Imicimbi efana nemibukiso yezohwebo kanye nokuvakashelwa kwezikhungo zokwazisa inikeza ithuba lale mihlangano yamasu we-B2B ukwenzeka. Kodwa-ke, ukuhlela imihlangano enjalo kuvame ukuba wumthwalo kubo bonke abathintekayo. Ngokwengeziwe, abathengisi bemicimbi bavame ukuba nobunzima ukukhombisa ukubaluleka kwale mihlangano nokuthi bayithonya kanjani ipayipi lokuthengisa nokwenza imali. Ngokwenhlolovo yakamuva, Amaphesenti angama-73 ama-CEO acabanga ukuthi abathengisi abanakho ukwethembeka kwebhizinisi. Njengoba ukumaketha kuvame ukuqhutshwa izindleko, abathengisi bemicimbi babhekana nenselelo enkulu yokukhombisa imbuyiselo kutshalomali ukugcina noma ukwandisa ingxenye yabo yesabelomali.
Abahleli bemicimbi baphatha imicimbi eminingi nganoma isiphi isikhathi bephatha amashejuli amaningi, bebhekana nama-imeyili abuyela emuva futhi kaningi besebenzisa ispredishithi ukufaka ngesandla lonke lolu lwazi. Ukukhombisa inani langempela kuwo wonke umsebenzi onzima abathengisi abawenzayo emicimbini, badinga ukuthola amathuluzi abasiza ukuhlela, ukuhlaziya idatha bese bekhombisa i-ROI ngomcimbi ngamunye.
Ukuhambela kude nokuphathwa okususelwa kuspredishithi
A Ipulatifomu Yokuhlangana Yokuzenzekelayo(MAP) isigaba se-software esenza ukuhamba komsebenzi kuhambisane nokuhlelwa kwangaphambi komhlangano, ukuphathwa kwemihlangano nokuhlaziywa kwangemva komhlangano nokulandelwa. Ukusebenzisa i-MAP kwandisa amathuba amabhizinisi okukhulisa inani kanye nekhwalithi lemihlangano yamasu. Kusebenza ikakhulukazi kumabhizinisi adinga ukuphatha imihlangano ephezulu kakhulu emicimbini, izikhungo zokwazisa, imihlangano yomgwaqo, imihlangano yokuthengisa kanye nezinkundla zokuqeqesha.
Qhathanisa lokhu nokusetshenziswa kokuphathwa kwemihlangano kwamasu okususelwa kuspredishithi. Lapho abathengisi basebenzisa amaspredishithi ukuphatha imihlangano yabo yamasu, izinkinga eziningana zivela kubakhangisi nakwabahlanganyeli bale mihlangano.
Ukubambisana - Ukuhlela umhlangano kufaka ababambiqhaza abaningi. Izikhathi eziningi, izimo ziyashintsha nokubuyekezwa kufanele kunikezwe abahlanganyeli bokuhlangana ukuze kugcinwe wonke umuntu ekhasini elilodwa. Kodwa-ke, lapho besebenzisa ispredishithi, abathengisi balahlekelwa umbono wokuthi ngubani obuyekeza ispredishithi noma uma bonke ababambiqhaza besebenzisa ispredishithi esifanayo noma esifanele.
- Njengabantu, asinayo incazelo ephelele yokuthi sithambekele ekwenzeni amaphutha. Kunjalo nalapho ufaka idatha kuspredishithi. La maphutha anamandla okukhokhela izinkampani izigidi zamaRandi.
Izimemo zemihlangano - Ngenkathi amakhalenda namaspredishithi kungelona ithuluzi elihle lokuhlela imihlangano yamasu, ahlinzeka insizakalo yokubamba amachibi amakhulu wedatha emile nokwenza izibalo. Ngeshwa, abahlonyiselwe ukwenza okunye njengokulawula nokugcina ithrekhi yemihlangano ehleliwe noma ukwenza izinguquko emininingwaneni yomhlangano.
Ukuhlanganiswa - Ukuphathwa kwemicimbi kumane nje kuyisiqeshana sikaphayi uma kukhulunywa ngenqubo yokuthengisa iyonke. Abathengisi bavame ukuphatha amathuluzi amaningi ngasikhathi sinye ukulandelela ukubhaliswa kwemicimbi okurekhodiwe, ukuthatha idatha kusuka kuma-badge scan, ukulandelela ukungena kwemihlangano, ukufinyelela nokufaka idatha kuye nokubuya ku-CRM nokuningi. Amasistimu asuselwa kuspredishithi enza le nqubo ibe yinselele kakhulu njengoba imvamisa ingakwazi ukuhlanganiswa nalezi zingxenyekazi ukudala umuzwa ongenamthungo.
Amamethrikhi nokuqonda - Imicimbi, imibukiso yezohwebo nezikhungo zokwazisa zinikeza abathengisi imininingwane ehlukahlukene. Amamethrikhi afana nenani lezimemo zemihlangano ezamukelwe, ubukhulu besivumelwano samanani, inani lemihlangano ngesivumelwano ngasinye esivaliwe, njll., Ziwusizo olukhulu lapho kuhlolisiswa impumelelo yemikhankaso nokusungula i-ROI.
Amaspredishithi awasenele emhlabeni wanamuhla ukuphatha ivolumu enkulu yemihlangano yamasu.
Ikhono lokuzenzekelayo ukuhlela, ukuphathwa kanye nokuhlaziywa kwemihlangano yamasu kwandisa inani lalokhu kuxhumana ngama-40% kuye kuma-200% ngokuya ngokuthi amakhasimende azijwayeza kanjani ukusetshenziswa kwalobu buchwepheshe. Izinkampani eziningi ze-Fortune 1000 zithole ukuthi ukusebenzisa i-Meeting Automation Platform (MAP) kuyisixazululo esonga izindleko kakhulu esikhiqiza ukubuyiswa okusheshayo ngaphakathi kwemicimbi emibili yokuqala futhi ezinyangeni ezimbalwa zokuqala ukusetshenziswa ezikhungweni zokwazisa.
Ukuphatha imihlangano nokuvala amadili noJifflenow
IJifflenow yadalelwa ukunikeza abakhangisi isisombululo sokuhlela umhlangano we-B2B, ukuhlela, ukuphathwa nokuhlaziywa. Ngeplatifomu yayo, abasebenzisi banokufinyelela kwimikhiqizo emibili kufaka phakathi imihlangano yeJifflenow Event kanye neJifflenow Briefing Center ethinta zonke izingxenye ezintathu zemihlangano yokuhamba komsebenzi: umhlangano wangaphambi kokuhlangana, ukuhlangana nokuhlangana komhlangano.
Ngesikhathi sesigaba sangaphambi komhlangano, ukuhlela nokuhlela kuyenzeka. Lokhu kubandakanya ukuthumela izimemo, ukubhuka igumbi nokuvumelanisa amakhalenda. Kunezinto eziningi zokuphathwa okufanele ziphathwe, kepha kubalulekile ukuthi ungakhohlwa ukuchaza izinhloso zalo mhlangano. Ngesikhathi sesigaba somhlangano, abaphathi bayenzeka, babheke abakhona, baphathe konke okuqukethwe okudingekayo, babheke ukutholakala kwezinsizakusebenza futhi balandele ukuqhubeka komhlangano. Ekugcineni, ngemuva kokuthi umhlangano usuphelile, ukuhlaziywa kungenzeka. Kulesi sigaba, kubalulekile ukukala, ukuhlaziya amamethrikhi nokulinganisa umthelela wemali engenayo. Konke lokhu kubalulekile ekufezeni imiphumela yangempela yebhizinisi ngokusebenzisa imihlangano yamasu we-B2B.
"Abakhangisi abasadingi ukuthembela ohlelweni lokuphatha olususelwa kuspredishithi olungaxhunyiwe ku-inthanethi, olwenziwa ngesandla, olunamaphutha, olungavikelekile nolungesabeki," kusho uHari Shetty, oyi-CEO eJifflenow. "Nge-Jifflenow's Meeting Automation Platform, solula isandla kubakhangisi esenza lula umsebenzi wokuphatha imihlangano ukuze bakwazi ukugxila kwezinye izici zomsebenzi wabo ngenkathi beqinisekisa ukuthi yonke imihlangano iyizipiliyoni zekhasimende ngalinye."
Ukuphumelela kwamakhasimende noJifflenow
Elinye lamakhasimende akwaJifflenow lifaka inkampani yobumbano yemishini yokuxhumana yomsindo. Ngalesi sihloko, sizobhekisa le nkampani njenge Umsindo. Umsindo usetshenziswa emhlabeni wonke ngochwepheshe besimanje, abashayeli bezindiza, abenzeli bezingcingo, abathandi bomculo nabadlali bamageyimu. Ukuba yinkampani yomhlaba wonke, iqembu lomsindo labhekana nezinselelo eziningana ezibandakanya:
Ukubhuka nokuxhumanisa imihlangano ezindaweni zabo zokwazisa emhlabeni wonke
Kunzima ukuthola abaphathi nokuthengisa abazongenela uhlelo
Ngokusebenzisa i-Jifflenow Briefing Center, ithimba lesikhungo somhlangano olalelwayo lithole isikhathi emuva ngokunciphisa umzamo osetshenzisiwe ukuthumela ama-imeyili emuva naphambili ekuphatheni izicelo, ukukhetha abethuli kanye nokuthola imininingwane yokuhlangana kanye nokuqinisekiswa. Ngokwengeziwe, ithimba lokumaketha lenkampani yomsindo manje selikwazi ukuletha izingxoxo eziqhutshwa ngumongo eziletha okuhlangenwe nakho kwamakhasimende okwenziwe ngezifiso. Ngoguquko olunikezwe yi-Jifflenow's Meeting Automation Platform, lolu hlelo lukhuphule ukubamba iqhaza nokwesekwa okuqhamuka emaqenjini aphezulu nabathengisi.
Kube ukuphefumula komoya omusha. Ngikwazile ukuthatha isinyathelo emuva futhi ngigxila ezintweni ezifanele ukunakwa kwami.
Umphathi Omkhulu ku-Audio
Cela i-Jifflenow Demo [/ link]
Izinkampani ezifuna ukuphatha ngempumelelo imihlangano yemicimbi, zinikeze amakhasimende ulwazi olungenamthungo futhi zenze imali kufanele zicabangele ukusebenzisa i-Jifflenow's Meeting Automation Platform, ukugwema ubungozi nezindleko zamathuba ezivela ekuphathweni okususelwa kuspredishithi. Ngokucabanga kabusha indlela eya emihlanganweni ezenzakalelayo ezindaweni ezithintwayo zamakhasimende, ochwepheshe bezokumaketha bangasho ukukhula kwebhizinisi ekutshalweni kwemali futhi bakwenze kube yingxenye ebalulekile yezinhlelo zokumaketha nezentengiso. Ukuze ufunde kabanzi ngokuthi iJifflenow ingakusiza kanjani ukuphatha kahle imihlangano emcimbini wakho olandelayo noma esikhungweni sakho sokwazisa, vakashela i-jifflenow.com.
Tags: inkundla yokumaketha yengqungquthelaukudayiswa komcimbiinkundla yokumaketha imicimbiukuzenzekelayo kokuzenzekelayoipulatifomu yokumaketha yengqungquthela eku-inthanethiyesikhulumi sokumaketha se-webinar
URavi Chalaka uyi-CMO ye- Jifflenow kanye nochwepheshe Wezokumaketha Nokuthuthukiswa Kwebhizinisi, owenza futhi asebenzise amasu ebhizinisi, akhiqize ukufunwa futhi akhulise ukuqwashisa ngomkhiqizo / komkhiqizo ezimakethe ezincintisanayo. Njenge-VP Yezokumaketha kuzo zombili izinkampani ezinkulu nezincane zobuchwepheshe, uRavi wakha amaqembu nemikhiqizo eqinile futhi wanika amandla ukukhula kwemali engenayo ngokushesha ngezixazululo ezahlukahlukene ezisuselwa kwi-Big Data, SaaS, AI ne-IoT software, HCI, SAN, NAS. URavi uneziqu ze-MBA kwezokuMaketha nezeziMali futhi ungumkhulumeli wemboni ongungoti nomethuli
Yazi Konke, Ngakho-ke Ungenza Noma Yini: Ukuthi I-6sense Iyiphazamisa Kanjani Imboni ye-ABM